Puntland oo fasaxday idaacada daljir kadib cafis madaxweyne - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo fasaxday idaacada daljir kadib cafis madaxweyne
July 4, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir ayaa la fasaxay kadib markii digreeto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Puntland lagu sheegay in madaxweynaha uu cafis u fidiyay.
Idaacada ayaa albaabada loo xiray 23-dii bisha Juun ee lasoo dhaafay Kadib markii amar kasoo baxay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade lagu sheegay in la xiro dhamaan xarumaha idaacada Daljir ee gobolada Puntland.
Xiritaanka idaacada ayaa lala xiriirinayaa kadib wareysi ay la yeelatay guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan oo maleeshiyaad ku haysta deegaan kuyaala gobolka Bari.
Radio Daljir ayaa ah idaacada maxaliga ah ee ugu weyn gobolada Puntland.
Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha ugu khatarta badan caalamka oo ay saxaafada ka howlgasho.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo maalmahaan Kismaayo shir uga socday ayaa sameystay gole iskaashi iyagoo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali u doortay guddoomiyaha golaha iskaashiga maamul goboleedyada, sida lagu sheegay bayaan. “Iyadoo [...]